Ny Sneaky Cpa lantonoara 2.0 - Ahoana no To Mamorona Simple mahomby lantonoara - Lantonoara Of The Day
Ny Sneaky Cpa lantonoara 2.0 – Ahoana no To Mamorona Simple mahomby lantonoara
Salama Jesisco eto,
Big Disclaimer : vokatra tsy mahazatra. Tsy mampanantena aho dia hahazo izany vokatra. Mety ho kely kokoa, tsy misy na avo kokoa. Izany rehetra niakatra ho any aminao.
Misaotra betsaka noho ny liana amin'ny Sneaky Cpa lantonoara pirinty 2.0. Nataoko be dia be ny asany ho ao an izany hasehoko anao amin'ny antsipiriany betsaka araka izay azo atao ny tena dingana nalaiko tsy hanam-tsy tetikady ho tonga toy ny Cpa sucessful Affiliate amin'ny latsaky ny 21 andro.
Aho nanao lantonoara tanteraka ho anao, azonao atao ny maka azy io maimaim-poana amin'ny farany, na raha tianao ianao afaka mianatra manangana azy ny tenanao. I nahatonga ao amin'ny pejy manaraka amin'ny tsikelikely fampianarana maimaim-poana.
Fa ny zavatra voalohany aloha…
Inona no CPA Marketing
CPA Marketing na Cost isaky ny fahazoana (CPA), fantatra koa amin'ny hoe “Cost isaky ny asa” na mandoa isaky ny fahazoana (PPA) ary isaky ny fiovam-po vidin'ny, dia dokam-barotra an-tserasera Pricing modely izay mandoa ny mpanao dokam-barotra ho voalaza fahazoana – ohatra ny fivarotana, Click, na manaiky Form (oh, fifandraisana fangatahana, Newsletter sonia, fisoratana anarana etc.).
Ianao mahazo ny vaomiera na ny saran'ny noho ny fampiroboroboana CPA tolotra na fampiharana.
Promotion azo atao amin'ny alalan'ny :
 pejy web
 Email fampielezan-kevitra
 Search (fikarohana)
 haino aman-jery sosialy ...
Na inona na inona fomba Ankasitrahan'i…
Tsy mila mamorona anao manokana vokatra ka ho faly amin'ny mpanjifa fanohanana ho toy ny Cpa marketer. Ary nanao izay mahitsy raha mety ho tena mahasoa toy ny fandraharahana modely.
Inona no tokony hahomby dia : fahalalana + hetsika
Hanana ny voalohany eto (fahalalana). Manao zavatra no anao. Raha tsy hanao zavatra ianao, dia tsy hahita na inona na inona. Miala tsiny ny milaza fa. Fa Tiako ho mazava tsara ho anao.
Ny tsara indrindra tambajotra CPA
Misy tolotra na fampiharana mety hitondra anao eo $0.1 ny $15 Vita ny asa isan-. Ary azo jerena ao amin'ny malaza indrindra tambajotra CPA. Ary tena afaka hiaraka. Torohevitra aho hisafidy iray ary tsy hiala aminy toy ny Newbie.
The Best Cpa lantonoara
Andao mihevitra izany – nandany izahay $20 mba fifamoivoizana (100 lasibatra Clics) mba hampandrosoana ny Cpa tolotra izay mandoa $ 2 / ny asa vita.
Ny fomba commoun
Amin'ny ankapobeny eto dia ny fomba mampirisika ny olona Cpa tolotra : Mandroaka fifamoivoizana ny fipetrahana pejy (ny famihinana pejy / a presell pejy / a toerana ...) ary raha vao ny fanantenana hiaraka ny mailing list, dia niova ny Cpa tolotra. Io fomba asa. Fa izany tsy mahasoa noho ny «sneaky cpa lantonoara» iray.
Ireto ny mahazatra ny vokatra avy 100 kitika
dia nahazo 40 optins
Fa 37% fiovam-po isika nahazo ny tahan'ny 15 vita ny asa.
Izany no $30 toy ny vola miditra
$10 Profit. Izahay amin'ny tombom-barotra.
Indraindray ny olona mitondra fiara fifamoivoizana mivantana ny tolotra amin'ny ankapobeny, ary mahazo latsaky ny 10% fiovam-po tahan'ny.
Ireto ny mahazatra ihany koa ny vokatra avy amin'ny 100 kitika
10 vita ny asa
Izany no $20 toy ny vola miditra
$0 tsy misy very tsy mahasoa. Tsy izahay amin'ny raharaham-barotra.
Sneaky Cpa lantonoara – Ny fomba vaovao hianjera Cpa naniraka
Mila ny «sneaky cpa lantonoara» ao an-toerana alohan'ny fiara draffic.
Inona no Atao hoe «sneaky cpa lantonoara» ?
Izany dia lantonoara naorina manodidina maro cpa tolotra izay mamela ny avo roa heny na telo mihitsy aza ny «tombony» avy amin'ny iray ihany fifamoivoizana. Tsy efa manampy anao mba hanao naniraka for FREE.
(disclaimer: ny sasany ahitana Affiliate rohy)
Ianao no mila fitaovana manaraka mba hanangana ny sneaky cpa lantonoara :
 Toerana (sehatra anarana) sy / na ny clickfunnel
 3 ny 4 cpa tolotra (Affiliate tolotra miasa koa)
The Process – Ny fomba fisainana Sneaky Cpa lantonoara
Tsy mitondra fiara ny lasibatra 100 Clics ny fipetrahana pejy. Ny voalohany dia mitondra ho tolotra Clic. Ny voalohany dia ny cpa tolotra ($2 raha vita) ary ny faharoa dia ny optin pejy.
Ary raha mitandrina ny mitovy by MediaWiki, eto no ananantsika toy ny vokatra :
From 100 Clics dia nahazo 40 optins.
Leads optin rehetra dia niova ho fanamafisana pejy izay Clic dia ho maro ny 2 indray. Ny voalohany ho an'ny tolotra cpa hafa ($2 raha vita) ary ny faharoa dia mandeha ho any amin'ny misaotra pejy.
Manana isika 2 Cpa dia manolotra tamin'izany pejy hatao vita. $2/hetsika.
Manodidina izahay, afaka manao $2+$2+(2*$2)= $ 8 / firaka
Izany ny $320 ho an'ny rehetra 40 optins. Tsy lazaina intsony fa mbola afaka mampiroborobo ny tolotra thorugh 5 day email series. no soa $300 ary isika fananganana ny lisitra ho an'ny FREE.
Izany no antsointsika hoe «sneaky cpa lantonoara». Izany dia manampy ny mitahiry vola lantonoara $ 6-8 $ / mitarika avy amin'ny $2 cpa tolotra. Ny ambony payout ny tsara kokoa.
Raha toa ianao handeha hamorona ity karazana lantonoara, ampahafantaro ahy raha toa ka mila fanampiana na mihoatra antsipiriany .... Na mitsidika fotsiny ny tsikelikely tutorial eto.
Alohan'ny mandeha, eto dia ny nataony ho anao lantonoara, raha tsy manam-potoana mba hanorenana anao. Aho mizara izany amin'ny alalan'ny clickfunnels mba mila ny kaonty, mba misintona izany. Tsindrio eto raha hamorona ny anao ary tsindrio eto raha haka ny sneaky cpa lantonoara.
Ary inona no manaraka? Hanao zavatra ary manomboka fiara fifamoivoizana ny lantonoara. Simply.
Ho fanohanana bebe kokoa, dia afaka mailaka antsika amin'ny [email protected]
Mirary ny soa indrindra ho anao
-Ny lantonoara ny andro Team